Muzvare Joana Mamombe Vanotorwa Zvechisimba Nemapurisa Kubva Muchipatara
Gunyana 16, 2020
Muzvare Joana Mamombe
Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West muParamende, Muzvare Joana Mamombe, zvichitevera kutadza kwavaita kumira mberi kwedare nhasi sezvange zvakatarisirwa kunyange hazvo magweta avo anga azivisa dare kuti Muzvare Mamombe vari kurapwa muchipatara.
Gweta raMuzvare Mamombe, VaJeremia Bhamu, vaudza Studio 7 kuti mapurisa manomwe auya negwaro rekuvasunga, kana kuti ‘warrant’, vakatora Muzvare Mamombe kubva muchipatara mavange vachirapiwa kunyange hazvo vanachiremba vavaudza kuti Muzvare Mamombe havasi kunzwa zvakanaka uye vanoda rubatsiro.
Gwaro rekuvasunga rinonzi rakanyorwa nekuti Muzvare Mamombe havana kuenda kudare redzimhosva kwavange vakatarisirwa nhasi.
Patavabata, VaBhamu vange vari mubishi muhurukuro nemapurisa kunzvimbo yavasina kudoma vachiti vanoda kuti vadzokere naMuzvare Mamombe kuchipatara.
Muzvare Mamombe ndeumwe wevanhukadzi vatatu, vanosanganisira Cecilia Chimbiri, naNetsai MarovaveMDC Alliance, vakapambwa vakatochwa zvakaipisisa muna Chivabvu gore rino.
Mutauriri weMDC Alliance, Advocate Fadzayi Mahere, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nemapurisa izvi zvinhu zvakaipisisa kwazvo, vachiti dare redzimhosva range raziviswa kuti Muzvare Mamombe vari muchipatara.
Advocate Mahere vati zvaitwa izvi inongova nzira yekushungurudza Muzvare Mamombe, uyo asati ambopora kubva kune zvaakaitwa mwedzi mishomanana yapfuura.
Tichienda pamhepo, tatadza kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi kuti tinzwe divi ravo.
Hurukuro naAdvocate Fadzayi Mahere